Macluumaad afaf kala duwan ku daabacan.
Waxa aannu doonaynaa inaan ku dadaalno seerfisyadaya aannu bixinno si sahlan inaan qolo waliba aan u gudbinno. Haddii afka aadan ku hadlin af Ingiriisiga aadna jeceshahay inaad afkaada aad nagula hadasho, fadlan na soo ogeysii. Waxa aanu isla markiiba kuu diyaarin karnaa inaad telefoon kula hadashid turjubaan afkaada ku hadlaya. Nala soo xiriir oo noo sheeg afka aad ku hadashid. Waxaad naqa soo wacdaa 0345 015 4033 ama email-kani nagala soo xiriir phso.enquiries@ombudsman.org.uk.
Macluumaad ku saabsan sida aad noogu soo dacwooto oo afaf kala duwan oo Af Soomaali uu ka mid yahay ayaad waxaad ka heli kartaa internetkani hoos ku yaal . Fadlan internetyadi hoosta ku qoran isticmaal. Haddii aad doonaysid inaad dacwad aad u soo gudbiso Seeriska Caafimaadka hay’ada u qaabilsan (Health Ombusman) Quick links